Hita izao fa ady tsy vita | NewsMada
Hita izao fa ady tsy vita
Par Taratra sur 18/11/2021
Manao tampody fohy indray ny valanaretina Covid-19 amin’izao? Toy izay miseholany any amin’ny faritra Menabe, faritra Vakinankaratra. Andiany fahatelo? Na efa karazany hafa… Vokatry ny fisokafan’ny sisintanin’i Madagasikara no hoe antony? Raha tsy izany, ny tsy fitandremana na tsy fanajana loatra intsony ireo fepetra sakana tsy hiparitahan’ny valanaretina amin’izay atao sy iainan’ny ankamaroan’ny olona.
Na ahoana na ahoana ary na inona na inona mety ho tohiny, hita izao fa ady tsy vita ny fiatrehana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19: eny ho eny ihany fa tsy hita maso, tsy resy tosika tanteraka, miovaova endrika… Sanatria, mety mbola hirongatra tampoka aza? Loza iray, loza roa… Loza fahatelo amin’izao fiverenany izao? Ilaina ny fanadihadiana sy ny filazana ny marina ao anatin’ny fangaraharana.
Tsy azo avela amin’izao na tamoraina ny raharaha, na toy inona heverina ho fahombiazana amin’ny ady mivantana teo aloha: fisian’ny fanafody fitsaboana, fanefitra… Sao manao toy ny tamin’ny fidiran’ny andiany faharoa? Nitompoan’ny sasany teny fantatra fa tsy hiditra eto Madagasikara izany, tsy hiverina amin’ny fihibohana. Kinanjo, mafimafy sy nahery vaika noho ny tamin’ny voalohany ny faharoa.
Tsy fandatsana, sanatria, fa fandatsahana an-tsain’ny tsirairay fa tsy hita atrehina mivantana ny fahavalo, tsy mampandre mialoha, tsy mifidy olona… Ny firenen-dehibe sasany izao efa miditra amin’ny andiany fahadimy. Inona indray no ndeha holazaina amin’izao fisehoan’aretina izao? tsy misy afa-tsy fiatrehana ny ady… hita fa tsy vita. Mila averina manontolo sy antsipiriany, ireo fepetra sakana.
Fomba fiaina amin’izany ny fanaovana arotava, fanasan-tanana matetika, fanajana ny elanelana iray metatra… Ny tsy fitandremana kely ataon’ny olom-bitsy no mety hitera-pahavoazana lehibe ho an’ny maro. Tsy izay ve no efa nahavoa sy nanjo tamin’ny andiany faharoa? Mila fitandremana bebe kokoa noho ny teo aloha fa efa natsahatra ny hamehana ara-pahasalamana, misokatra ny sisintany…